FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCORKIE - ALIKA
Alika avy amin'ny tertera Scottish Terrier / Yorkshire Terrier
'Tsy nanana olana ara-pahasalamana i Gabbi. 7 taona izy izao. Mbola mavitrika be izy ary tia mandany sy mandeha mitsangantsangana miaraka amin'ny fianakaviany. Tena miaro ny fianakaviany izy fa mivovo fotsiny rehefa tsy tiany olon-kafa. Izy dia leased voaofana . Mamaly izy baiko am-bava . Ity karazana mix ity dia tena manan-tsaina. Miaraka izy biby hafa . '
Ny alika scorkie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Scottie ary ny Yorkie . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
IDCR = Registera canine mpamorona iraisam-pirenena®= Scorkie Terrier
Gabbi the Scorkie puppy amin'ny 10 herinandro - 'Gabbi dia fifangaroan'ny Scottie / Yorkie be fitiavana. Tiany ny mikoropaka sy milalao miaraka amin'ireo zanako telo. Tiany ny manao veloma miaraka amin'ny fianakaviany. Milanja 4 kilao izy tamin'ny faha-14 herinandro. '
Gabbi ilay scorkie puppy amin'ny 10 herinandro
Gabbi the Scorkie amin'ny faha-7 taonany miaraka amin'ny sakaizany Yorkie.
Gabbi the Scorkie puppy amin'ny faha-5 volana— 'Gabbi dia fangaro any Yorkie / Scottie. Tena mahatoky sy be fitiavana amin'ny fianakaviany izy. Tiany ny milalao mamanay miaraka amin'i Yorkie zandrinay. Tiany ny mitazona azy ary mamihina matetika. Tiany ny manao veloma.
Alika mifangaro mix Milo the Scottie / Yorkie (Scorkie) - 'Ity i Milo, Scorkie zanako 8 volana milanja 10 pounds. Manana toetra Scottie be izy. Izy dia iray amin'ireo alika sambatra sy mpinamana indrindra hitako. '
ny fako zanak'osy Scorkie amin'ny 4 herinandro— 'Ity misy sary vitsivitsy an'ny fako Scorkie. Avy amin'ny ra mahery 2 izy ireo! Izy ireo dia biby fiompy ao amin'ny fianakaviana tsara, ary mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy. Mahira-tsaina izy ireo, be fitiavana ary tsy mivadika. Tian'izy ireo ny mifampikasoka. Mahafinaritra sy milalao izy ireo, ary ny habeny marina ihany! Tsy hahazo mihoatra ny 10-15 lbs. '
Alika scorkie amin'ny 4 herinandro
Milo the Scottie / Yorkie mix karazany (Scorkie) - 'Tena mahay i Milo! Fantany daholo baiko fototra (mipetraha, mandry, mihozongozona, mangataka, avia, mijanona), ary ankoatr'izay dia nianatra ny 'nijoro' izy rehefa nipetraka teo ambaniny. '
Milo the Scottie / Yorkie mix karazany (Scorkie) - 'Rehefa mandeha isam-bolana dia manomboka mijery kokoa an'i Scottie izy, fa rehefa mijery ny endriny aho dia heveriko ho toy ny mainty fotsiny izy Yorkie . Ankoatra ny fiofanana vilany , izy no mora indrindra bandy kely hiaina miaraka! Tsy hainay hoe nanao ahoana ny fiarahanay ela be raha tsy teo izy! '
Milo the Scottie / Yorkie mix karazany (Scorkie) - 'Tiany ho voafihina toy ny zazakely eo an-damosiny izy, ary matory izy raha mikoty ny sofiny ianao.'
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Scorkie
Sarin'i Scorkie, 1